CPU-X နှင့် CPUFetch: CPU ၏ parameters များကိုမြင်ယောင်ရန်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်း ၂ ခု Linux မှ
CPU-X နှင့် CPUFetch - CPU ၏ parameters များကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးဝင်သောအက်ပ် ၂ ခု
နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များ (သုတေသနသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်း) အတွက်သို့မဟုတ်သိချင်စိတ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် (Days of Desktops) အကြောင်းများကြောင့်၊ စိတ်အားထက်သန်သောကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအတွက်ဖြစ်စေ GNU / Linux များအလွယ်တကူသိရှိပြီးအဆင်ပြေစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ရန်အရေးကြီးသည် CPU တန်ဖိုးများ သင့်ကွန်ပျူတာမှ ထိုအဘို့, လျှောက်လွှာရှိပါတယ် "CPU-X" နှင့် "CPUFetch".
ထို့ကြောင့် "CPU-X" နှင့် "CPUFetch" လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်း2စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သော applications များဖြစ်ကြသည် ဖော်ပြချက်နှင့် CPU ကို parameters တွေကိုစောင့်ကြည့် မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို၊ ဂရပ်ဖစ်ရော၊ terminal ပါပါသုံးစွဲစေလိုသည် Hardinfo နှင့် Lshw-GTK ကျွန်ုပ်တို့၏ Terminal မှအခြားသော Hardware Monitors သို့မဟုတ် Utilities (သို့) Command Command ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ Hardware ၏အသေးစိတ်ကိုသိရန်ဖြစ်သည် lshw, inxi နှင့် cpuinfo.
ကတည်းက, ဒီ post ကိုကမ်းလှမ်းရန်အချိန်မီဖြစ်ပါတယ် အခြားဖြည့်စွက်ရန်အချက်အလက်များ အပေါ် အက်ပ်များနှင့် command များ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုဒ်များ၌ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့ကိုအောက်တွင်ချန်ထားလိမ့်မည် ယခင်ရေးသားချက်များမှလင့်များ ဒီစာအုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါသူတို့စူးစမ်းလေ့လာနိုင်အောင်၊
"HardInfo သည်အသုံးပြုသောဟာ့ဒ်ဝဲ၏အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော် lshw နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည် operating system, desktop environment, runtime, active kernel module များ၊ ရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားများ၊ file system အချက်အလက်များကိုအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များလည်းပြသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းသည် lshw ထက်အသေးစိတ်ကျသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ပိုမိုလွယ်ကူသည့် interface ကြောင့်ပိုမိုအလိုလိုသိသည်။ အလားတူစွာ hardinfo သည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုး (benchmarks) ကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။" သင့် system ၏ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသိရန်ကိရိယာ ၃ ခု
1 CPU-X နှင့် CPUFetch - CPU အချက်အလက်ကြည့်ရှုရန် GUI နှင့် CLI အက်ပလီကေးရှင်းများ
1.1 CPU-X ဆိုတာဘာလဲ။
1.1.1 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
1.2 CPUFetch ဆိုတာဘာလဲ။
1.2.1 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
CPU-X နှင့် CPUFetch - CPU အချက်အလက်ကြည့်ရှုရန် GUI နှင့် CLI အက်ပလီကေးရှင်းများ
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အက်ပလီကေးရှင်းကို၎င်းကိုဖော်ပြသည် -
"CPU-X သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပြီး CPU၊ motherboard နှင့်အခြားအရာများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်"
CPU-X သည် system monitoring နှင့် profiling application (Windows အတွက် CPU-Z နှင့်ဆင်တူသည်) ဖြစ်သော်လည်း CPU-X သည် GNU / Linux နှင့် FreeBSD အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်သည်။
၎င်းကို GTK ကို သုံး၍ ဂရပ်ဖစ်စနစ် (သို့) NCurses ကို သုံး၍ စာသားပုံစံတွင်သုံးနိုင်သည်။
၎င်းကိုသင်၏လက်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည် 4.2 ဗားရှင်းထဲမှာ ".AppImage", "tar.zg" နှင့် "zip" ပုံစံများ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ GitHub.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိစ္စအတွက်, ငါတို့သုံးပြီးက install လုပ်ပါလိမ့်မယ် ".AppImage" format ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းစွာမြန်ဆန်စွာ install လုပ်ရန် operating system အသုံး (MilagrOS -> Respin သည် MX Linux ကိုအခြေခံသည်).
အောက်ပါ screenshots များမှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
အဆိုပါအညီ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အက်ပလီကေးရှင်းကို၎င်းကိုဖော်ပြသည် -
"CPUFetch သည်ရိုးရှင်းသော်လည်းလှပသော CPU ဗိသုကာရှာဖွေရေးကိရိယာဖြစ်သည်။"
ထို့အပြင်၎င်းအကြောင်းကိုအလေးပေးဖော်ပြသင့်သည် ရိုးရှင်းသော command line tool (CLI) လာမည့်:
၎င်းသည် Neofetch နှင့်ဆင်တူသော်လည်း Linux, Windows, MacOS နှင့် Android Operating Systems ရှိ CPU ၏ဗိသုကာကိုရရှိရန်နှင့်ပြသရန်အာရုံစိုက်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏လိုဂို (ဥပမာ၊ Intel, AMD) နှင့်အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်အခြေခံ CPU သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖော်ပြသည်:
nanometers ရှိ Semiconductor နည်းပညာ (nm)
အဆင့်မြင့် Vector Extensions (AVX)
ပေါင်းစည်းခြင်း - မြှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ် - များပြား - ပေါင်း / FMA ညွှန်ကြားချက်များ
L1, L2 နှင့် L3 cache အရွယ်အစား
အလားတူလက်ရှိနိုင်ပါတယ် GIT မှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်း သင့်ရဲ့ repository ကိုမှ GitHub။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိ၌ရှိသည် 0.94 ဗားရှင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည် operating system အသုံး (MilagrOS -> Respin သည် MX Linux ကိုအခြေခံသည်) အောက်ပါ command command များကိုအောက်ပါ:
မှတ်ချက်: သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ကွမ်းခြံကုန်း ထို့အပြင်၎င်းကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးအဖြည့်ဖြစ်သည် Desktop သောကြာနေ့.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «CPU-X y CPUFetch»,2လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သော applications များ ဖော်ပြချက်နှင့် CPU ကို parameters တွေကိုစောင့်ကြည့် မည်သည့်ကွန်ပြူတာမှမဆို၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » CPU-X နှင့် CPUFetch - CPU ၏ parameters များကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးဝင်သောအက်ပ် ၂ ခု